Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 11:1-54
Munyengetero wemuenzaniso (2-4)
Madhimoni anodzingwa nemunwe waMwari (14-23)
Mweya usina kuchena unodzoka (24-26)
Mufaro wechokwadi (27, 28)
Chiratidzo chaJona (29-32)
Rambi remuviri (33-36)
Vane nhamo vanyengeri vezvitendero (37-54)
11 Mumwe musi aiva pane imwe nzvimbo achinyengetera, uye paakapedza, mumwe wevadzidzi vake akati kwaari: “Ishe, tidzidzisei kunyengetera, sezvo Johani akadzidzisawo vadzidzi vake.” 2 Saka akati kwavari: “Pese pamunonyengetera, itii: ‘Baba, zita renyu ngaritsveneswe.*+ Umambo hwenyu ngahuuye.+ 3 Tipeiwo zvekudya zvezuva rimwe nerimwe maererano nezvatinenge tichida zuva iroro.+ 4 Tiregerereiwo zvivi zvedu,+ nekuti isu tinoregererawo munhu wese anotitadzira;*+ uye musatipinza mumuedzo.’”+ 5 Akabva ati kwavari: “Ngatitii mumwe wenyu ane shamwari yake uye anoenda kwairi pakati peusiku oti, ‘Shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu, 6 nekuti ndashanyirwawo neimwe shamwari yangu iri parwendo uye handina chekuipa.’ 7 Asi uya ari mukati anopindura achiti: ‘Usandinetsa. Tatokiya suo, uye ini nevana vangu tatorara. Hazvichaiti kuti ndimuke ndikupe zvauri kuda.’ 8 Ndinokuudzai kuti, kunyange akarega kumuka kuti amupe zvaari kuda sezvo ari shamwari yake, anozopedzisira amuka omupa zvese zvaari kuda nekuti anenge aramba achimuteterera.+ 9 Saka ndinoti kwamuri, rambai muchikumbira,+ uye muchapiwa; rambai muchitsvaga, uye muchawana; rambai muchigogodza, uye muchazarurirwa.+ 10 Nekuti munhu wese anokumbira anopiwa,+ munhu wese anotsvaga anowana, uye munhu wese anogogodza achazarurirwa. 11 Chokwadi ndibaba vapi pakati penyu vangati kana mwanakomana wavo akakumbira hove vomupa nyoka panzvimbo pehove?+ 12 Kana kuti akakumbirawo zai, vangamupa rize here? 13 Saka kana imi, kunyange zvazvo makaipa, muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, ko kuzoti Baba venyu vari kudenga, vangatadza here kupa mweya mutsvene kune vaya vanovakumbira?”+ 14 Pava paya, akadzinga dhimoni raitadzisa munhu kutaura.+ Pakabuda dhimoni racho, murume uya akatanga kutaura, uye vanhu vakashamiswa.+ 15 Asi vamwe vavo vakati: “Anodzinga madhimoni achishandisa Bherizebhubhu,* mutongi wemadhimoni.”+ 16 Uye vamwe, vachida kumuedza, vakatanga kumuti avaratidze chiratidzo+ chinobva kudenga. 17 Achiziva zvavaifunga,+ akati kwavari: “Umambo hwese hwakapesana hunoparara, uye imba yakapesana inoparara. 18 Zvino kana Satani ava kuzvirwisa pachake, umambo hwake hucharamba sei hwakamira? Nekuti munoti ndinodzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu. 19 Kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu, vanakomana venyu vanoadzinga vachishandisa ani? Ndokusaka vachizova vatongi venyu. 20 Asi kana ndichidzinga madhimoni nemunwe waMwari,+ chokwadi Umambo hwaMwari hwakusvikirai.+ 21 Kana murume akasimba, ane zvombo zvakakwana akachengetedza muzinda wake, hapana anotora zvinhu zvake. 22 Asi kana akavingwa nemumwe munhu akasimba kumupfuura omukurira, munhu iyeye anomutorera zvombo zvake zvese zvaanga achivimba nazvo, ogovanisa vanhu zvinhu zvaanenge amutorera. 23 Munhu wese asiri kudivi rangu anorwisana neni, uye wese asingaunganidzi neni anoparadzira.+ 24 “Mweya usina kuchena paunobuda mumunhu, unopfuura nemunzvimbo dzisina mvura uchitsvaga pekuzororera, uye kana washaya unoti, ‘Ndichadzokera kumba kwangu kwandakabva.’+ 25 Uye uchisvika, unowana imba yacho yakanyatsotsvairwa uye yakashongedzwa. 26 Unobva waenda wonotora mimwe mweya minomwe yakaipa kuupfuura, uye kana yapinda mukati, inogara imomo. Saka munhu iyeye anopedzisira aipa kupfuura zvaaiva pakutanga.” 27 Paaitaura mashoko aya, mumwe mukadzi aiva pakati pevanhu vakawanda vaivepo akashevedzera kwaari achiti: “Rinofara dumbu rakakutakurai nemazamu amakayamwa!”+ 28 Asi iye akati: “Aiwa, vanofara ndevaya vanonzwa shoko raMwari vorichengeta!”+ 29 Vanhu pavaiungana, iye akatanga kuti: “Chizvarwa chino chizvarwa chakaipa; chinotsvaga chiratidzo, asi hapana chiratidzo chachichapiwa kunze kwechiratidzo chaJona.+ 30 Nekuti sezvakaita Jona,+ kuti akava chiratidzo kuvaNinivhi, Mwanakomana wemunhu achavawo chiratidzo kuchizvarwa chino. 31 Mambokadzi wekumaodzanyemba+ achamutswa pakutongwa pamwe chete nevanhu vechizvarwa chino uye acharatidza kuti vane mhosva, nekuti akabva pasi kwenyika kuzonzwa uchenjeri hwaSoromoni. Asi onai! mumwe munhu anopfuura Soromoni ari pano.+ 32 Vanhu vekuNinivhi vachamuka pakutongwa nechizvarwa chino uye vachachipa mhosva, nekuti vakapfidza zvivi zvavo pavakaparidzirwa naJona.+ Asi onai! mumwe munhu anopfuura Jona ari pano. 33 Munhu akabatidza rambi, haariisi parisingaoneki kana kuti pasi petswanda,* asi anoriisa pachigadziko cherambi,+ kuti vaya vanopinda vavhenekerwe. 34 Rambi remuviri iziso rako. Kana ziso rako rakatarisa chinhu chimwe chete,* muviri wako wese wakajekawo;* asi kana riine ruchiva,* muviri wako uchavawo murima.+ 35 Saka ivai nechokwadi kuti chiedza chiri mamuri hachisi rima. 36 Saka kana muviri wako wese wakajeka pasina kana pamwe pane rima, wese uchava wakajeka sezvinoita rambi parinokuvhenekera.” 37 Paakanga ataura izvi, mumwe muFarisi akamukumbira kuzodya naye. Saka akapinda, akagara patafura. 38 Asi muFarisi wacho akashamiswa paakaona kuti haana kutanga ageza* asati adya.+ 39 Asi Ishe akati kwaari: “Imi vaFarisi munochenesa kunze kwekapu nendiro, asi mukati menyu makazara makaro neuipi.+ 40 Mapenzi! Akaita kunze haasi iye akaitawo mukati here? 41 Asi ipai zvipo zvengoni* zvichibva pane zviri mukati menyu, uye zvimwe zvese zviri pamuri zvichabva zvava zvakachena. 42 Asi mune nhamo imi vaFarisi, nekuti munopa chegumi chemindi neruyi nemimwe miriwo yese,+ asi hamuna basa nekutonga nyaya zvakarurama uye kuda Mwari! Zvinhu izvi maifanira kuzviita, asi kwete muchizorega kuita zvimwe zvacho.+ 43 Mune nhamo imi vaFarisi, nekuti munoda zvigaro zvepamberi* mumasinagogi uye kukwaziswa mumisika!+ 44 Mune nhamo, nekuti makafanana nemakuva* asiri kunyatsooneka,*+ zvekuti vanhu vanofamba pamusoro pawo vasingazvizivi!” 45 Mumwe wevaya vainyatsoziva Mutemo akamupindura achiti: “Mudzidzisi, pamuri kutaura mashoko aya muri kutotitukawo.” 46 Iye akabva ati: “Nemiwo vanonyatsoziva Mutemo, mune nhamo nekuti munotakudza vanhu mitoro yakaoma kutakura, asi imi pachenyu hamutomboigunzvi nemunwe wenyu!+ 47 “Mune nhamo imi, nekuti munovaka makuva evaprofita, asi madzitateguru enyu ndiwo akavauraya!+ 48 Chokwadi muri zvapupu zvemabasa emadzitateguru enyu asi munobvumirana navo, nekuti vakauraya vaprofita+ asi imi muri kuvaka makuva avo. 49 Ndokusaka uchenjeri hwaMwari hwakatiwo: ‘Ndichavatumira vaprofita nevaapostora, uye vachauraya uye vachatambudza vamwe vavo, 50 kuti chizvarwa chino chitongerwe ropa* revaprofita vese rakadeurwa kubva pakuvambwa kwenyika,+ 51 kubvira paropa raAbheri+ kusvikira kuropa raZekariya, akaurayirwa pakati peatari nemba.’*+ Ndinokuudzai chokwadi kuti richabvunzwa pachizvarwa chino. 52 “Mune nhamo imi munonyatsoziva Mutemo, nekuti makabvisa kiyi yeruzivo. Imi pachenyu hamuna kupinda, uye munotadzisa vaya vanenge vachida kupinda!”+ 53 Saka paakabuda ipapo vanyori nevaFarisi vakatanga kumudenha vachimubvunza mimwe mibvunzo yakawanda, 54 vachimuhwandira, kuti vamubate pane zvaanenge ataura.+
^ Kureva kuti rinofanira kukudzwa kana kuti kuremekedzwa sezvo riri dzvene.
^ Kana kuti “ane chikwereti nesu.”
^ Kana kuti “richinyatsoona; rakanaka.”
^ Kana kuti “uzere nechiedza.”
^ Kureva, kugeza maererano netsika dzechitendero.
^ Kana kuti “ipai varombo zvipo.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “nemakuva evanoyeukwa.”
^ Kana kuti “asina kuiswa micherechedzo.”
^ Kana kuti “chibvunzwe nezveropa.”
^ Kana kuti “netemberi.”